isidlaliso sakhe Ukuzibulala Dr. Dzhek Kevorkyan ngokwengxenye, kwakungenxa yokuthi abaningi ukuzibulala bokusiza. Wayebheka bafaneleke kufa omunye wabangane amalungelo abantu ukuthi ngalutho imithetho isimo. Jack wayekholelwa ukuthi ukuhlupheka anganquma ukuba bahoxe ukuphila, nokuthi odokotela kufanele bavunyelwe ukuba kumnika nale.
Ekuqaleni, uJakobe (Jack) Kevorkian wayefuna ukuba umhlaziyi baseball, kodwa abazali bakhe-Armenian basemazweni okufika kholwa it nekusasa elihle kakhulu ngaphezulu. Ngakho waba udokotela-sezifo. Dzhek Kevorkyan wasebenza ngokuyinhloko nabafileyo, okwenza kwesidumbu ukuze uhlole isimo lesi sifo. Abazali bakhe ngicabange ukuthi wayeyoba omunye wabasunguli be-"tanatrona" wanamuhla - "umshini ukufa" ngesiGreki - futhi owokuqala ukusiza abantu zisebenzisa kulo mshini.
Dzhek Kevorkyan: Biography
Kevorkian wazalwa Meyi 28, 1928 ku Pontiac, Michigan, futhi ngakhulela-Armenia, isiGreki futhi imvelo Bulgarian. Watadisha eMedical School e-University of Michigan, lapho lathweswa iziqu ngo-1952. Ngokokuqala ngqá, wathola okwesabisayo ngelika uDkt Ukufa for ucwaningo lwakhe ukuphayona bezokwelapha ngo-1950. Jack izithombe emehlweni izigulane ezifayo ngomzamo yini ukuthola isikhathi esinembile sokufa. Wayekholelwa ukuthi ulwazi ngqo ngeke inikeza ukwaziswa okuwusizo mayelana izifo. sezifo Kevorkian wasebenza ezibhedlela amathathu isimo: St Joseph, e Pontiac futhi Wyandotte. Waphinde wasebenza e okukhethekile efanayo, futhi kwezinye izibhedlela e-Los Angeles. Kevorkian kwaba umsunguli kanye nomqondisi we isikhungo sezokwelapha zokuxilonga e Southfield, Michigan, kanye sezifo abakhulu Saratogskoy Isibhedlela eDetroit. Uye eshicilelwe izincwajana ezingaphezu kuka-30 nama-athikili emaphephabhukwini ezokwelapha, kuhlanganise "kadokotela: kuzuze ukufa kuhlelwe".
udokotela American Dzhek Kevorkyan waba ubufakazi kubo ukuhlupheka neziguli ezigulela ukufa futhi uye waba umsekeli umsekeli oqinile yokuthi babenesifiso kwesokudla zokuziphatha ukufa, lapho ubuhlungu baba babulawa, nokuthi odokotela kufanele sibasize kule. Kuze kube yimanje, lapho zaklama futhi zakha izindawo umshini esesandleni yomuntu, ngokufuna ukufa, ngemithambo yegazi injected saline ayinangozi. Lapho lesi siguli ngomumo, Nibavakashela inkinobho, engenangozi isixazululo ukugeleza samiswa, waqala esasikhipha thiopental. This chemical iqondiswa isiguli ngilele ubuthongo obukhulu, bese ku equlekile. Ngemva umzuzu owodwa, timer e umshini wagijima nokuphathwa umthamo ebulalayo potassium chloride, okuyinto imizuzu eminingana kuholele ukuboshwa inhliziyo. Isiguli wabulawa isifo senhliziyo ngesikhathi ngilele ubuthongo obukhulu. Ukufa, ngokuvumelana Kevorkian, ngokushesha, ngaphandle kobuhlungu futhi kulula. Ukuze umuntu uhlushwa ubuhlungu sekugcina umdlavuza noma isiphi esinye isifo, imishini ie ukunikeza. N. ukubulawa kwesiguli kobuhlungu.
Biography: Dzhek Kevorkyan - Doctor Ukufa
Ngo-June 1990, Jack waba owokuqala uchungechunge eziningi usizo nokuzibulala. Wasebenzisa imoto yakhe ukusheshisa nokushabalala UJanet Adkins, owesifazane oneminyaka engu-54 ubudala e Portland, Oregon, owahlupheka isifo i-Alzheimer. ngokushesha Michigan wathweswa icala lokubulala, okwathi ngokuhamba kwesikhathi kuhoxiswe ikakhulu ngenxa ngesimo esingokomthetho okungacaci ngosizo lokuzibulala e isimo. Ngo 1999 abantu abangaphezu Kevorkian basiza kokufa cishe 130 abantu. Esimweni ngasinye, wenze ingxenye yakhe eyomphakathi njengengxenye ushintsho imikhankaso sengqondo yomphakathi nemithetho ezingenathemba zingakhetha ukuzibulala nge usizo lwezokwelapha.
Abaningi Alondoloza Kevorkian benza. Juni 21, 1996 ngesikhathi enengxoxo isiteshi somsakazo Detroit intatheli ithelevishini eyaziwa Mayk Uolles wayethi wayemdala futhi ukulungele ukuba baphendukele Kevorkian, uma kunesidingo. Wayezokwenza ukwenzile uma wayehlushwa sebuhlungwini obunzima, futhi isikhathi eside nokugula, njengoba unelungelo ukwenzani lokho ebona kufaneleka khona.
Abanye abavumelani nalo mbono. I-National Association of balimala eqolo kuqhathaniswa usizo ukuzibulala, kwakunabanye ezingcono ukuxazulula le nkinga. Ukwenqaba zokwelapha ungumuntu siqu izindlela ukufa - emzini wakho siqu nomndeni wakho noma embhedeni wasesibhedlela. Ukubulawa kwesiguli kuhilela ukudluliselwa amalungelo othile ukuba athathe ukuphila kwakhe. Umuntu kunikezwa ilungelo ukubulala.
Naphezu kwalezi zinkinga zomthetho njalo, Dzhek Kevorkyan yaqhubeka inikeza usizo nokuzibulala. Ngo-1994, wabhekana necala lokubulala yini ngokufa Thomas Hyde, ngubani wayehlushwa esibulalayo nerve isifo eyaziwa ngokuthi Lu Geriga isifo. Amajaji wavumelana agumenti ukuthi Michigan kungekho umthetho ngokumelene usizo ngokuzibulala, futhi ngaleyo ndlela, Kevorkian ayikwazi enecala.
Ithimba odokotela abameli wathola omunye ukuthethwa yicala. Leli thimba lalimelela isikhundla ukuthi umuntu angeke icala usizo isigebengu ezingenathemba zingakhetha ukuzibulala, uma lowo muntu uye wathola izidakamizwa ngenhloso okudambisa ubuhlungu nokuhlupheka, ngisho noma washesha ukufika nokufa. Kevorkian waboshelwa ezine euthanized e Michigan, futhi utholwe izikhawu ezintathu. Endabeni wesine, kwamenyezelwa ukuthi mistrial.
Ngo-1998, i-Michigan isiShayamthetho waphasisa umthetho owawuthi usizo ukuzibulala kubhekwa kwaba icala elinesijeziso iminyaka emihlanu ebhadla ejele noma $ 10,000 esihle. Umthetho Waqala ukusebenza izinyanga ezimbalwa ngaphambi isiphakamiso zivunyelwe ukuzibulala sinqatshiwe abavoti isimo. It ivaliwe ikhono ukudambisa ubuhlungu nokuhlupheka abameli Kevorkian sika esetshenziswa ukuthola acquittals. Umthetho unikeza ukuthi umuntu owazi mayelana nezinhloso lomunye ukuzibulala, futhi inikeza indlela ikhomishana, ehilelekile ukuzibulala noma kusiza ukuhlela ukuzibulala unecala elikhulu felony.
fighter Calvary ukuze bathole ilungelo afe
Kevorkian baqhubeka lokho eyayicabanga ukuthi kulungile futhi ngokuthi iziphathimandla ukuba abophe futhi simelane naye. Septhemba 17, 1998 ayezenza ukubulawa kwesiguli Thomas Yuka. Esikhundleni sokucela isiguli cindezela inkinobho bese ufaka umthamo ofayo, Kevorkian, ukukhuluma isiguli Lu Geriga isifo, uSathane wasungula kuye emuthini. Ngaphezu kwalokho, yonke imicimbi wathatha ku nge-video ukuze kungabi nakungabaza ukuthi akwenza kwakukubi khona. Khona-ke wanika tape ukuze "60 Minutes 'uhlelo lwethelevishini. Lesi siqephu ukuthi ukusakaza emhlabeni wonke.
Ngokushesha ngemva kwalokho, Kevorkian, uboshelwe icala lokubulala kuleli idigri yokuqala. Kulokhu, lapho wethula Thomas Juku umthamo eyingozi imithi, ayenakho ukubulawa kwesiguli izimisele noma "isihe ukubulala", kodwa awazange asize e nokuzibulala. Kevorkian Uphinde wathweswa nge Kulicala ngokomthetho, ke akuvunyelwe ukukhuthaza ukuzibulala, okuyinto Waqala ukusebenza cishe amasonto amabili ngaphambi kokufa Yuka. Jack wanquma mathupha azivikele enkantolo. Mashi 26, 1999 yijaji of Michigan, watholakala enecala lesibili degree ukubulala.
Enflame izenzo zabo umbono womphakathi, Kevorkian baqhubeka nokukhankasela semthethweni abazibulalayo ekhiqizwa nge usizo lwezokwelapha. Wayelindele ukuboshwa, futhi ngokuvamile indlela lezo zinto zenzekile. Wayekholelwa ukuthi enze okusemandleni ukuba abantu abagulela ukufa ukuzwisa ubuhlungu obukhulu. Kulokhu, Kevorkian wakwazi ukuba adonsele ukunakekela umphakathi kule nkinga futhi ukuphoqa izinkantolo nemizimba zomthetho ukuthatha isinqumo kule ndaba.
Dzhek Kevorkyan June 1, 2007, ngemva nokufakwa sokuba ngoshwele ukuziphatha okuhle, ngadedelwa ngemva kokuchitha iminyaka engu-8 ebhadla ejele futhi izinyanga 2.5.
UDkt Ukufa wathatha uchungechunge lwezinkulumo e-University of Florida, California futhi eLos Angeles, ezithinta hhayi kuphela isihloko ukubulawa kwesiguli, kodwa futhi kobugqila uhlelo lwezobulungiswa, ezombusazwe, neSichibiyelo 9th US uMthethosisekelo namasiko American. Ngo-2008, lapho, ukhetho njengelungu elizimele, waba nengxenye ukhetho Congress, ethola 2.6% wamavoti.
Ngo-2010 impilo yakhe Yenziwa ifilimu, "You Do not Know Jack", lapho uDkt Jack (Dzhek Kevorkyan) wawubonisa umlingisi waseMelika odumile Al Pacino. Ngoba lo indima, yena yanikezelwa le "Globes Golden" "Emmy" futhi mathupha wabonga ngqondongqondo yakhe, owayekhona ezilalelini.
May 18, 2011 Dzhek Kevorkyan esibhedlela ngiphethwe i-pneumonia futhi sezinso, futhi ngo-June 3, wayesefa. Wembelwa Troy, Michigan. I Epitaph phezu kwethuna udokotela uthi, "ukuba zizinikele amalungelo zonke."
Nicole Linkletter ( "Melika Landelayo Top Model 5"): Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu